न्यू योर्क को अनुभव, तनहुँबासीलाई अनुरोध
कोरोना भाइरस विश्वभरी निर्दयी बनि रहदाँ अमेरीकाको न्यू योर्क राज्यमा भने निकै क्रुर बन्यो । त्यसमा पनि न्यू योर्क को क्विन्स काउण्टी त कोरोना भाइरसको अड्डा नै बन्यो । त्यही कोरोनाको अड्डा मा बसेर देखेको, सुनेको, र भोगेको यर्थाथलाई यस आलेख मार्फत सम्प्रेषण गर्ने जर्मको गरेको छु । यस सामाग्रीको उद्देश्य कोरोना को बर्तमान तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी दिनु या कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने या रोकथाम को उपयाहरुको चर्चा गर्नु होइन । कोरोना न्यू योर्क कसरी कोरोना भाइरसको पछिल्लो इपि सेन्टर बन्न पुग्यो र अहिले कसरी सामान्य बन्दै छ, भन्ने विषयको समिक्षा मार्फत मुलत दमौली बासी र समग्र तनहूँबासीहरु कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा विर्मश गरिएको छ ।
पहिलो सक्रमण पुष्टि हुनु पूर्व नै दश हजार मानिसमा सक्रमण ।
मार्च १, २०२० को दिन न्यू योर्कको म्यानह्याटनमा ३९ वर्षिय महिलामा कोरोनाको सक्रमणको पहिलो केश पुष्टि भएको थियो । उनी इरान भ्रमण बाट आएको थिइन भन्ने छ । यो आलेख तयार पार्दा सम्म न्यू योर्कमा ३ लाख ५६ हजार भन्दा बढिमा सक्रमण पुष्टि भएको छ भने करिव २८ हजार न्यू योर्करर्स ले ज्यान गुमाइ सकेका छन् ।
न्यू योर्क राज्यका गर्भनरको भनाई लाई उद्दरण गर्ने हो भने न्यू योर्कमा पहिलो केश पुष्टि हुन पूर्व नै दश हजार भन्दा बढी मानिसमा यसको सक्रमण भई सकेको थियो । हाल सम्म कोरोनाको सक्रमण पुष्टि भएको छैन । दमौली÷तनहूँ सुरक्षीत छ भन्दै सावधानी तथा रोकथाम का उपायाहरुलाई सामान्य रुपमा लिनु निकै मह्गो सावित हुन सक्छ । यसर्थ, यो दृष्टान्त लाई आधार मानेर सावधानीका मापदण्डलाई सवै तनहूँबासीले अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
शहर बाट होइन ग्रामीण क्षेत्रबाट फैलियो संक्रमण
न्यू योर्कमा कोरोनाको सक्रमण शुरुवात शहर बाट होइन ग्रामीण ग्रामीण काउण्टी“न्यू रोसेल” र “वेष्टचेष्टर” बाट भएको थियो । न्यू योर्क राज्यका गर्भनरको भनाई अनुसार विदेश भ्रमण बाट आएका एक जना ब्याक्तिले एउटा समाजिक—धार्मिक कार्यक्रममा भाग लिदाँ सयौं ब्याक्तिहरुमा संक्रमण फैलाएका थिए । यस दृष्टिबाट हेर्दा जनघनत्व भन्दा पनि जनघनत्वात्मक वातावरण यस्ता जिवाणुको संक्रमण फैलाउन बढि जिम्मेवार हुने रहेछन् । तसर्थ, आवश्यक भन्दा बढी गरिने भेला, मेला, महोत्सव, उत्सव, धार्मिक सभा हरु सधै जोखिम पूर्ण हुन्छन भन्ने सन्देश कोरानाले दिएको छ ।
राहात तथा भोजन वितरण कार्यक्रम निकै नै उत्सहाप्रद रुपमा चलेको देखिन्छ । दमौली÷तनहूँ वासीले यस्तो विषम परिस्थीतमा गरेको यस्तो समाजिक कार्यको प्रसँसा सायद शब्दमा गर्न सकिदैन । तर, यस्ता समाजिक कार्य गर्दा सावधानी नअपनाउने हो भने न्यू रोसेल र वेष्टचेष्टर को कथा पुर्नवृत्ति हुदैन भन्न सकिदैन । तसर्थ, समाजिक कार्यमा जुट्ने तथा राहात लिने सवैले समाजिक दुरी तथा आफ्नो व्याक्तिगत सुरक्षाको बारेमा थोरै पनि लापरवाही गरियो भने परिस्थीति गम्भिर बन्न सक्छ ।
“सेल्फ क्वारेण्टिन” या “सेल्टर अट होम” भएका मानिसहरुमा देखियो बढि सक्रमण
न्यू योर्क को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुुसार काम मा गएका मान्छे भन्दा आफ्नै घरमा सेल्फ क्वारेण्टिन अर्थात स्व—अलगिकरणमा बसेका मानिसहरुमा कोरोनाको संक्रमण बढि देखिएको छ । मे महिनाको पहिलो हप्ताको आकडाँ अनुसार कोरोना संक्रमित मध्ये ६६ प्रतिशत संक्रमित लामो समय देखि काममा नगई घरमै बसेका थिए भए १८ प्रतिशत नर्सिङ्ग होममा बस्दै आएका थिए । यी मध्ये सवै विरामीले लामो समय काममा नगई घरमा वसेका तर खाद्यान्न खरिद, पार्क तथा बाहिर भने समय समयमा निस्केको बताएका थिए । यो तथ्याङ्क देखाउदै न्यू योर्कका गर्भनर ए.एम. कुमोले सेल्फ क्वारिण्ट या सेल्टर एट होम को आदेश भन्दा पनि जनताको सामाजिक दुरी एवम् ब्याक्तिगत सुरक्षा समवेदनशीलता यो सक्रमणको रोकथामको महत्वपूर्ण आधार हो ।
दमौली / तनहूँ पनि लक डाउनको अवस्थामा रहेको छ तर सामाजिक सञ्जाल तिर देखको आधारमा भन्ने हो भने मानिसहरु ग्रोसरी तथा फलफूल तरकारी खरिदमा निकै असावधानी पूर्वक हिड्ने गरेको देखिन्छ । आफ्ना निकट साथी भाई हरु घुमफिरमा निस्केका तस्वीरहरु देखिन्छ । यस्ता लापरवाही ले निकै ठूलो जोखिम जन्माउन सक्दछ । यसको व्यवस्थापन प्रशासनको लठ्ठीले भन्दा पनि पनि हरेक व्याक्तिले आफ्नो नागरिक दायित्वको रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउने तथा प्रत्येकले हरेक अर्को व्याक्ति सँग सामाजिक दुरी कायम गर्नै पर्दछ ।
स्मरण होस, यो जीवाणु निकै नै संक्रामक देखिएको छ । एक ब्याक्ति बाट अर्को तिव्र ज्यामीतिय दरमा सर्ने गुण नै यो जीवाणु सवै भन्दा जटिलता हो । करिव ८० प्रतिशतमा कुनै लक्षण नै नदेखिकन यो रोग निको हुने तर त्यो संक्रमित ब्याक्तिले सयौं मानिसलाई सार्छ, भन्ने ठम्याई रहेको छ । त्यसैले, को संक्रमित छ या छैन? त्यसको कुनै देखिने लक्षण हुदैन । तसर्थ, उपचारका लागी औषधी तथा खोपको विकास नभएको वर्तमान परिस्थीतिमा कोभीड—१९ को नियन्त्रणको उपया को अनिवार्य शर्त हो “सेल्फ आइसोलेनसन” र “समाजिक दुरी” । यस्ता किसिमका जैविक किटाणु कहिले, कसरी, को र कहाँ बाट उत्पत्ति हुन्छ? यकिन हुदैन । तर जोखिम सम्भावना हरेक क्षण रहन्छ । तसर्थ, सावधान सवै र सधै रहनु पर्दछ ।
समाजिक दुरी र ब्याक्तिगत सुरक्षामा जनता संवेदनशील हुदाँ घट्यो सक्रमण दर
न्यू योर्कमा केही हप्ता अघि सम्म दैनिक दशौं हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमण हुने तथा १ हजार को हाराहारीमा मृत्यु हुने गर्दथ्यो । यस्तो भयावह अवस्था ब्योहोरेको न्यू योर्क अहिले केही रहात महशुस गरेको छ । पछिल्लो केही दिनयता, दैनिक नयाँ संक्रमण ५ सय भन्दा कम र मृत्यु १ सय को आसपासमा रहेको छ । यो सामान्य अवस्था त हुदै होइन तर पनि गणितको हिसाव कितावमा यो अवस्था निकै राहात को हो । संक्रमणमा कमि आउनु को मुख्य कारण मानिसले सामाजिक दुरी कायम गर्नु तथा आफ्नो ब्याक्तिगत सुरक्षामा सवै समवेदनशील हुनु हो ।
न्यू योर्क जस्तो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा भएको शहरमा त कोरोनाको प्रकोपले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र नै निरिह भयो । कहिलै नथाक्ने न्यू योर्क शहर अहिले कोमा मा पुग्यो । कोरोनाले यस्तो वितण्ड मच्चाउनुमा सवै भन्दा ठूलो कमाजोरी न्यू योर्क बासी को थियो। सुरुवाती अवस्थामा समाजिक दुरी तथा ब्याक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षामा न्यू योर्क बासीले गरेको नजरअन्दाजले आजको भयङ्ककर अवस्था निम्त्यायो । दमौली÷तनहूँ बासीले न्यू योर्करर्सले जस्तो गल्ती नगरुन । कोरोना संक्रमण नफैलिए सम्म यो सामान्य अफवाहा जस्तो लाग्छ तर संक्रमण फैलिए पछि यो कति क्रुर छ त्यो न्यू योर्कर्स लाई जत्ति जानकारी अरुलाई सायदै होला । यसर्थ, यसलाई एउटा पाठ को रुपमा लिएर सम्पूर्ण दमौली÷तनहूँ बासी ले अगाडी बढ्नु पर्दछ । कोरोना माथि विजय प्राप्त गर्न एक्लिनुको विकल्प छैन ।“घर बसौं, परिवार वाहेक अन्य मानिसको सम्र्पकमा नआउ । आफू बचौं, अरुलाई बचाउ ।”
(लेखकः व्यास ४, हाल न्यू योर्क स्थीत योर्क कलेज, सीटि युनिर्भसीटि का प्राध्यापक हुन ।)
Seimadidaily (सेतीमादी) May 17, 2020
One thought on “न्यू योर्क को अनुभव, तनहुँबासीलाई अनुरोध”
Dr Ramkumar Adhikari says:
सूचना र सचेतनाका लागि धन्यवाद ।
Previous Previous post: उपत्यकाका तीन जिल्लामा सत्ताको ताबेदारी गर्दै पास वितरण गरिएको पूर्वमन्त्री भण्डारीको भनाई
Next Next post: म्याग्दीका पुनले गरे तारकेश्वर र टोखामा राहत वितरण